Nhau - Zvimiro zveVakajairika Vasungwa
1. Ikozvino kugona kweiyo zinc oxide inosunga yakakura
Izvi zvinonyanya kuratidzwa mukugona kwevabati vemheni kuti vatore kuwanda kwemheni kwakasiyana-siyana, masimba emagetsi epamberi, uye mashandiro emvura. Ikozvino kuyerera kugona kweiyo zinc oxide inosungwa inogadzirwa naChuantai inosangana zvizere kana kutopfuura zvinodikanwa zvemitemo yenyika. Zviratidziro senge mutsetse kuburitsa nhanho, simba rekutora simba, 4/10 nanosecond yakakwira yazvino kukanganisa kushivirira, uye 2ms mativi emagetsi wave zvazvino simba asvika epamba inotungamira nhanho.
2.Yakanakisa dziviriro hunhu hwe zinc oxide inosunga
Zinc oxide arrester chigadzirwa chemagetsi chinoshandiswa kuchengetedza michina yemagetsi mune yesimba system kubva kukuvara kwemagetsi, uye ine dziviriro yakanaka yekuita. Nekuti iyo isina-mitsara volt-ampere hunhu hweiyo zinc oxide vharafu ndiro yakanaka kwazvo, zvekuti mazana mashoma chete microampere yazvino inogona kupfuura pasi peyakajairika kushanda voltage, zviri nyore kugadzira isina gadziriro chimiro, kuti ive nechengetedzo yakanaka kuita, kurema uremu, uye saizi diki. chimiro. Kana iyo yepamusoro-voltage ikapinda, iyo yazvino inoyerera kuburikidza nevhavha yevhavha inowedzera nekukurumidza, uye panguva imwechete iyo kukura kweiyo inopfuura-magetsi kune mashoma, uye simba reiyo yepamusoro-voltage inosunungurwa. Mushure meizvozvo, iyo zinc oxide vharafu ndiro inodzokera kune yakakwira kuramba nyika, kuitira kuti iyo system system ishande zvakajairika.
Kuiswa chisimbiso kwe zinc oxide arrester kwakanaka
Icho chinosunga chinhu chinotora yepamusoro-mhando jekete ine yakanaka kuchembera mashandiro uye yakanaka yekudzivirira mhepo, uye matanho senge kudzora kumanikidzwa kweiyo yekuisa chisimbiso mhete uye kuwedzera chisimbiso. Iyo ceramic jekete inoshandiswa sechinhu chekuisa chisimbiso kuona simbiso yakavimbika uye kugadzikana kuita kweiye anosunga.
4. Iyo michina maficha ezinc oxide anosunga
Kunyanya funga zvinotevera zvitatu zvinhu:
Force Kudengenyeka kwenyika simba;
Mhepo yakanyanya kumanikidza kuita pane anosunga
⑶ Kumusoro kwekupedzisira kweiye anosunga ane hunyoro hunotenderwa tension.
5. Iyo yakanaka decontamination performance ye zinc oxide inosunga
Iyo isina gap zinc zinc oxide inosungwa ine yakanyanya kusvibiswa kuramba.
Iyo yazvino nhanho yekukwira chinhambwe yakatsanangurwa nematanho emunyika ndeiyi:
⑴Class II yepakati kusvibisa nzvimbo: inofamba nzvimbo 20mm / kv
⑵ III nhanho inorema yekusvibisa nzvimbo: creepage chinhambwe 25mm / kv
⑶ Giredhi IV, inorema zvakanyanya kusvibisa nzvimbo: inofamba nzvimbo 31mm / kv
6. iye akakwirira kushanda kuvimbika kwezinc oxide inosunga
Kuvimbika kwekushanda kwenguva refu kunoenderana nemhando yechigadzirwa uye kana kusarudzwa kwechigadzirwa kuchinzwisisika. Hunhu hwezvigadzirwa zvayo zvinonyanya kukanganiswa nezvinhu zvinotevera zvitatu:
A. Rationality yeiyo yakazara chimiro chemusungwa;
B Volt-ampere maitiro uye kukwegura kuramba maitiro e zinc oxide valves
C Kuiswa chisimbiso kweiye anosunga.
7. Simba frequency kushivirira
Nekuda kwezvikonzero zvakasiyana senge single-phase grounding, refu-mutsara capacitance mhedzisiro uye mutoro marara musimba system, zvinokonzeresa kukwira kwesimba frequency voltage kana kuburitsa inopfuura yekuwedzera kwevhu ine yakakwira amplitude. Anosunga anogona kumira imwe simba frequency mukati menguva yakati yenguva. Voltage inowedzera kugona.